Guur-doon Adduun waayay
(Sheeko Gaaban) Wq. Axmed Ismaaciil Maxamuud (Axmed Deeq)
Ma weyna oo afartan ma gaadhin; mana yara oo saddon waa dhaafay. Ma guursan oo gabadh xalaala waligii kama soo ag toosin; mana gaabsan oo mid xaaraana gidaar kuma luf-lufin. Xoolo gabadh loogu geed fadhiisto ma laha; xeelad lagu soo guri galiyana haba sheegin; xoogse toban lagu qabo waa leeyahay. Waa qaadaa ma dharge quutal daruurigiisa ka adag. Maalintii waa u xammaalasho iyo xoogsi, habeenkiina waa u gal-galad iyo gedgeddoon; waa u qaraw iyo sawirro aan qurxoonayn; waa u tuhun iyo taah aan dhammaan. Sariirtiisa jiiq jiiqda badan habeenna cidi lama seexan, habeenna kalidii ma seexan. Inta dumar uu yaqaan iyo inta uu sheedda ka arkay buu sida geel hor-weyn darkiisa ku soo horaa, oo uu habeen oo idil ku hawlan yahay. Hebello uu yaqaannay oo guursaday buu maankiisa ku soo xaadiriyaa, tolow hebel hadda muxuu samaynayaa? Waa xilli danbe oo waa hurdaa. Halkee buu hurdaa ma gosha islaantiisa mise garabkeeda? Meel buu kaligii gataata dhacsan yahay. Suurto gal ma'aha. Haddaa maxaa suurto gal ah? Mooyi.
Marka uu ragga la joogo wuxuu iska dhigaa nimaan dumarka dan iyo heello ka lahayn, hadda maankiisa iyo madaxiisana miridh kama maqnaadaan. Haasaawin ogaa marka ayka maqan yihiin haweenku, markase ay la joogaan wuxuu yeeshaa gango ama shig-shigid aanu u dhalan.
Wuu eegmo kulul yahay oo haddii ay gabadh iska soo hor baxaan wuxuu ku ganaaindhihiisa aad goodka moodo iyo daymadiisa naxariista daran. Waxaanu xubin,xubin ugu qalaa jidhkeeda, haba ugu sii daraadaan labada horaad iyo foolkuye.Gabadhu markan waa faraxdaa oo waxay moodaa nin garanaya sida uu u eegayo,markase ay u soo dhawaato ee ay ogaato inaanay xataa habeena isku riyoon ayaynaxdaa oo ay moodaa in jidhkeeda meelo ka mida maradu ka baylahsan tahay,dibaanay isugu noqotaa. Marka ay ag marayso wuxuu isku daraa guux, reen iyocodad kale oo siloon oo aan u magac waayay. Marka ay weydaaratana dabinta hooseinta uu qaniino ayuu ka daba geeyaa eegmo xun oo uu kaga beegay qar-qarka danbeee ay weedhaaminayso illaa ay ka libdhayso. Kuwa uu yaqaanna marka ay iska soo hor baxaan wuxuu is yidhaa si deggan oo kal-gacalleh u eeg, mase yaqaan oo waxaad mooddaa inuu baryayo ama cawryayo. Oo horta kaalay maxaa dumarka u diidey in uu la haasaawo? Waxba'e maalin buu tu yar ku baxay oo uu go'aansaday inuu la haasaawo. Daan-daansigii ibo furka u noqon lahaa sheekadooda ayaa ka xumaaday oo halkii uu ka odhan lahaa: Walaalo saacaddu waa imisadii? Ayuu ka yidhi: Walaalo saacaddu waa 5:30 galabnimo, iyo yaa ku waydiiyay saacad? Inaad i waydiisay baan moodayay, dhibse malaha ee ma xaggaas baad u sii socotay? Xaggaan u socdo waad u jeedaa. Waan gartaye, magacaa abaayo gabadh qurux badan baabad tahaye? Markan uu isagu xod-xodanayo iyana xanaaq bay ka dhan tahay oo waxay isleedahay qofkan yaa kaa reeba inta aan lagugu sawirin, waayo ladnaani dushiisa kama muuqato; lacagina jeebkiisa kuma jirto, haddii ay ku jirtana cashadiisa ma dheera. Waxaanay ugu jawaabtay: Waxa la i yidhaa magac la'. Anba haddii aan magac kuu bixiyo ka waran? Oo adigu miyaad i dhashay? Mayee, waan kula dhashay. Waad mahadsan tahay ee nabad gelyo ayay tidhi iyada oo kor iyo hoos u eegaysa (huruuftamaysa) sankana dhaq dhaqaajinaysa, hadalkana aad mooddo inay maqashiinayso dad ku soo dhawaa. Naxdin waynaa, inta uu hareeraha eegay ayuu siigo kiciyay oo uu jiiradii ugu dhawayd ka laabay, isaga oo isku buuqsan boodhkana isku qarinaya. Waxa uu ku tallamay: Waraaba cuntu sawta meesha kugu ceebaysay; tolow qolooyinkii idiin dhawaa miyay idin maqlayeen? Miyaanay qoftu ninna la dhalan? Miyaanayse waligeed nin la haasaawin? Maxaase adiga ku raaciyay nacasta? Waydiimahaa iyo qaar kale oo badan ayuu haragga isaga sii saaray intiiuu gaadhayay maqaaxi ay islaan suxul baruur ahi haysatay oo uu fadhiisan jiray. Islaanta beri hore ayuu odaygeedii xijaabtay, caruurteeduna waa wada qaan-gaadh ,masay guursan dabadii. Markii u dabada dhulka la helay isaga oo yar hiin faadhaya, dhidid, boodh iyo dufan isku dhafmayna wajigiisa ka tir-tiraya ayuu las oo baxay bac yar oo ay ugu huursanaayeen laba qori oo uga hadhsanaa caqaartii jaadka ahayd ee uu maanta gatay. Ma mirqaan baa ku soo deg degaya saw marba tii yarayd iyo waxay badday lama horkeenayo. Markii uu iligga saaray laantii u horraysay ayuu koob shaaha oo bigays caanoole ah ka dalbaday islaantii. Intii ay ugu maqnayd iyo intii ay ku soo maqnaydba iyada ayuu ka fekerayay; iyada ayuuna ku fekerayay. Bal ka warran haddaad islaantan afka u dhuubto? Armay sidii tii yarayd giir iska kicisaa? Iska kicin mayso, oo waayo? Iyadu malaha wax lagu gor-gortamo oo jimidhkeediiiyo jamaalkeedii waxa jicsin (sahay) ka dhigtay allaw naxariisaygii ka dhintay. Laakiin bal si wanaagsan u fiiriyoo miyay ku anfacaysaa? Wallaahi inkasta oo jidhkeedu isku soo ururay caddiinkiina ka dhammaaday oo laf iyo seedi is qabsatay,haddana miyaanay dhaamin wax la'aanta? Way dhaantaa, laakiin ha ku deg degin ee bal u kaadi kolay tani cid aan adiga ahayn uma joogtee. Waydiimahaas iyo wercelinahaas intii uu ku jiray bay shaahii u keentay. Waxaanay ku tidhi: Hanbalyadana miyaa la iskala bakhaylayaa? Maya'e yaa guursaday, ama dhashay? Aniga ayaa guursaday. Yaab badanaa, oo goormaad guursatay yaadse guursatay? Waxaannu is guursanay Xaaji Dalal, odaygii iska rogada lahaan jiray ee inamadiisuna Yurubta ku maqnaayeen. Ilbidhiqsi in ka yar ayuu ku xasuustay hadal uu maalin sii horraysay nin ay saaxiib ahaayeen ku yidhi oo ahaa: Odaygani beryahan shaah cab badanaa, barqadii, casarkii iyo cawayskiiba waan ku arka amaqaaxidane!!. Isna hadalkiisaa waxbaba kama soo qaadin maalintaa, waayo is malahayn odaygan lafta dheeri godatay baa guur u feedhanaya. Inkasta oo aannu kiisani ahayn guur ee uu yahay wayso dhawrasho. Waxaanu yidhi: Hanbalyo….Hanbalyo, bal miyaan mar hore ka garto indho caddaantaada. Iyada oo luqunta jan-jeedhinaysa xishood yarina ku jiro ayay ku tidhi: Oo qofku marka uu guursado ma in dhahaa caddaada? Haa, waayo wixii saxar iyo siigo ku jirtay baa ka soo baxda. Halkeed ku aragtay mabaad guursanne? Riyaan ku arkay. Run baan hadddaba kuu sheegayaaye dadka indhahaa casaada. Isaga oo sababta waydii is leh ayaa shaah laga dalbaday aroosaddii. Waxa uu is arkay isaga oo kalidii isku buuqsan oo is leh: Maqaaxi uun ma furataa si aad u guursato? Adduunka aad maqaaxi ku furanayso miyaad ku guursatid? Oo horta kaalay guurku ma lagama maar-maan baa mise waa looma dhintaan? Lagama maar-maan buu u yahay nolosha sii jiritaankeeda. Ha u ahaado, laakiin weli miyaa la arkay qof la yidhi guur la'aan buu u dhintay? Maya. "Waa Ilaahay mahaddii haddaa"ayuu si kalsooni darro ah u yidhi.
Doobkani wuxuu u baahan yahay talo iyo tilmaan; wuxuu u baahan yahay guur iyo gabadh; wuxuu u baahan yahay gurmad iyo gar-gaar inta aanu qarxin sidii nukliyeerkii Japan. Waxaanad ka helaysaa isaga oo kanbadhuudha xaafadda "Kas-daran" dariiqa if iyo aakhiro, ka soo horjeedka buulka islaanta ina Wayse-wanaaje. Axmed Ismaaciil Maxamuud (Axmed Deeq)